Izixhobo zeMilo eSisiseko yeAdobe CS5
NguJennifer Smith, uChristopher Smith, uFred Gerantabee
I-Adobe Creative Suite 5 (i-Adobe CS5) I-Illustrator ibandakanya izixhobo ezisisiseko zokumila. Isixhobo esibonakalayo kuphela kwiphaneli yezixhobo, ngokungagqibekanga, isixhobo soxande. Cofa uze ubambe esi sixhobo kwaye ube nokufikelela kuxande olujikeleziweyo, i-Ellipse, iPolygon, kunye nezixhobo zeNkanyezi, nangona ubona isixhobo seFlare, ayisosimo similo.
Ungasikrazula esi sixhobo ukuze ungafumani iimilo ezifihliweyo kamva. Cofa uze ubambe isixhobo soxande kwaye utsale utolo kwicala lasekunene. Linda ude ubone i-pop-up hint (Tearoff) emva koko ukhulule iqhosha le mouse. Ezi zixhobo ngoku zikwi-toolbar edadayo yasimahla onokuthi uyitsale uye kwenye indawo.
Yenza ii-rectangles kunye nee-ellipses
Iingxande kunye nee-ellipses zezona milo zisisiseko onokuthi uzenze. Ukwenza imilo yoxande simahla, khetha isixhobo soxande kwaye ucofe iphepha apho ufuna ukubonakala khona.
Emva koko tsala udiagonally kwicala elichaseneyo, tsala imouse yakho umgama ofuna imilo ubungakanani, kwaye ukhulule iqhosha le mouse. Ungarhuqa uye ezantsi. Wenza ngokufanayo ukwenza i-ellipse usebenzisa isixhobo se-Ellipse.
Sebenzisa isixhobo esingunxantathu esijikeleziweyo
Cofa kwibhodi yezobugcisa kube kanye ukuze uvule ibhokisi yencoko yebhokisi engqukuva, apho ungangenisa khona amaxabiso ukuchaza ubume. Ngenisa ixabiso kumhlaba wombhalo weKona yeRadius, ogqiba ukuba kungakanani ukujikeleza okusetyenzisiweyo kwiimbombo zobume.
Guqula ikona ejikelezileyo ngokubonakalayo ngokucinezela amaqhosha aphezulu naphantsi kwikhibhodi yakho ngeli xesha urhuqa imilo yoxande ejikelezayo kwibhodi yezobugcisa. Ixabiso lincinci, iikona ziyajikeleza kancinci; ixabiso liphezulu, kokukhona ziyajikeleza iikona.
Guqula ubume bepholigoni ngokufaka amaxabiso amatsha kummandla wombhalo weRadius kunye neeSides. Irediyasi imiselwe ukusuka embindini ukuya emaphethelweni wepoligoni. Ixabiso lenani lamacala linokuvela kwi-3 (ukwenza oonxantathu umoya ophucukileyo ukuyila) ukuya kwi-1,000.
Ukwenza ubume beenkwenkwezi, khetha isixhobo seNkwenkwezi kwiphaneli yezixhobo. Ingazimela phantsi kwezinye izixhobo zokwakheka. Ukuba ucofa ibhodi yezobugcisa kube kanye ukuze uvule ibhokisi yencoko yababini yeKhwezi, ubona imihlaba emithathu yokubhaliweyo apho ungafaka khona amaxabiso ukuze wenze ngokwezifiso imilo yenkwenkwezi yakho:
Ukusondelana kunye iRadius 1 kunye neRadius 2 amaxabiso omnye komnye, amafutshane amanqaku kwinkwenkwezi yakho. Ngamanye amagama, ungaya kwi-starburst uye kwisitywina sokuvunywa ngokufaka amaxabiso asondele kwiRadius 1 kunye neRadius 2 kwimihlaba yokubhaliweyo.
vivitrol wadubula utywala
uyiskena njani into
idosi amoxicillin yosulelo lwezintso